Chii chinonzi chirevo chebhangi, ndechei uye kuti ungachiwana sei | Ehupfumi Zvemari
Pane dzimwe nguva paunosangana nemateedzana ezvinyorwa izvo, zvekutanga, zvinoita kunge zvisina kukosha. Unotovaona sekutambisa mapepa, nguva nemari. Nekudaro, izvi zvinogona kuve zvakakosha kwazvo. Izvi ndizvo zvinoitika kubhangi statement.
Kana iwe uchida ziva kuti chii chinonzi bank statement, ndeupi ruzivo rwaunogona kukupa iwe, zvakanakunokupa iwe zvine chekuita nezve accounting uye rumwe ruzivo rwekufarira, ruzivo urwu rwatakugadzirira ruchakubatsira kugadzirisa kusahadzika kwako kwese.
1 Chii chinonzi bank statement
1.1 Inerudzii data
1.1.1 Chinyorwa Zuva
1.1.2 Bank statement account muridzi
1.1.3 Kodhi yeakaundi
1.1.4 Zuva rekushanda
1.1.5 Pfungwa yekushandisa
1.1.6 Chiitiko chekukosha zuva
1.1.7 Mari yekutengesa
1.1.8 Nhoroondo yeakaunzi
2 Chii chiri chirevo chebhangi?
3 Maitiro ekuona sei kuburitsa
4 Ungawana sei chirevo chebhangi
Chirevo chebhangi chinogona kutsanangurwa sekudaro gwaro rinotumirwa nebhangi, nemagetsi kana neposvo, zvinoratidza pfupiso yekufamba kweakaundi yebhangi mukati memwedzi wese, pamwe chete nemari iripo yeakaundi iyoyo.
Mune mamwe mazwi, tiri kutaura nezve gwaro raunogona kuona kufambiswa kwemari nemari zvave zviri muakaundi yebhangi mune imwe nguva yenguva.
Izvo zvisati zvave zvakajairika kumabhangi kutumira chirevo kune avo vatengi pamwedzi, kuitira kuti vagokwanisa kuve nekutevera kune kwavo accounting pamwe neyemari nemari. Nekudaro, zvishoma nezvishoma izvi zvaiwira mukusashandiswa, kana iri sevhisi iyo yairi kubhadhariswa kuti urambe uchizviita, nenzira yekuti vazhinji vakabvisa kutumirwa uku kana kuti vakaigamuchira kuburikidza neInternet (kukwanisa kugadzirisa mazuva, mhando mafambiro, nezvimwewo).
Kana iwe ukakumbira chirevo chebhangi, pane ruzivo rwakawanda kuti, kana usina chokwadi kuti zvinorevei, zvinogona kukukurira. Nekudaro, zviri nyore kwazvo kunzwisisa. Uye ndizvo iwe unenge uine masere masere akasiyana ekuteerera. Izvi ndizvo:
Ndokunge, zuva rakaburitswa chirevo chebhangi (chakadhindwa, chakakumbirwa, nezvimwewo). Izvo zvakakosha kuti ugone kudzora mafambiro eimwe nguva yenguva.
Bank statement account muridzi
Kuti uzive kuti ndeipi bank account (uye munhu kana kambani) gwaro iri rinoreva.
Isu tinotaura nezve iyo account account, iyo institution, hofisi uye DC. Mune mamwe mazwi, iyo yakazara account kodhi kana IBAN kodhi.
Mune ino kesi iwe unowana akawanda akanaka iwo, uye ndiro zuva iro, kungave mari kana mari, yakanyoreswa muaccount yebhangi. Nenzira iyoyo, iwe unozoziva kana iyo mari yabhadharwa (ingave yakanaka kana yakaipa).
Mune ino kesi ivo vanokutsanangurira iwe kuti iyo mari kana mari iyo inoratidzwa mune chirevo yasvika kupi. Muchokwadi, dzimwe nguva zvinotova zvinodzidzisa kupfuura iwo musi pachawo kana kukosha kwekuita kwakaitwa.
Chiitiko chekukosha zuva
Zuva rekukosha, sekufungidzirwa neBhangi reSpain, inguva iyo «chikwereti muaccount account chinotanga kuburitsa chimbadzo kana kana chikwereti chikarega kuburitsa chimbadzo, zvisinei nezuva rekuverenga account kana" note accountant "".
Mune mamwe mazwi, tiri kutaura nezve zuva iro iko kuvhiyiwa kwave kushanda.
Mari, yakanaka (mari) kana isina kunaka (mari) yakaitwa.
Chekupedzisira, iwe unenge uine account account, zvese zvekare, uye iyo yauinayo mushure mekuita kufamba.
Chii chiri chirevo chebhangi?
Chirevo chebhangi hachisi chinyorwa chete panofambiswa mafambiro eakaundi (uye mari inochinja irimo), asi inoenderera mberi kubvira Izvo zvinonyanya kubatsira pakuverenga uye kutonga zvine chekuita nemari uye mari.
Uyezve, kuburikidza neizvi tinogona bvunza mari inobviswa, mari, mari kana zvikwereti zvakananga, zvikwereti, komisheni, nezvimwe
Chirevo chebhangi chingaite senge chisina musoro, asi chokwadi ndechekuti kune zvakawanda zvakanaka pakuishandisa, kusanganisira zvinotevera:
Unogona kuona zvikanganiso. Kutenda kune chokwadi chekuti gwaro rebhangi rinokuratidza kufamba kwese kweye bank account, kunyangwe iri mari kana mari, ndiyo sosi yakatendeka yezvakaitika kumari dzako uye nekudaro unogona kuona kana paine chero mari kana mari iyo isiri kana isu tichimurangarira.
Unogona kusimbisa mari yaunowana uye kubhadhara. Kana uine vatengi vakati wandei, kana makambani akati wandei ekubhadhara, nesitatimendi chebhangi unogona kuona kuti zvechokwadi mari kana mubhadharo zvave kugutsikana uye, nenzira iyoyo, kukanganwa nezvavo (zvirinani kusvika mwedzi unotevera).
Yako accounting ichakurumidza. Nekuti haufanire kutsvaga mubhadharo kana dhipoziti, unenge uine gwaro panotariswa zvese kubva kuaccount. Kana iwe uine maakaundi akawandisa, iwe unofanirwa kuve nezvitatimendi zvakasiyana zvebhengi zvinoratidza ruzivo irworwo kuitira kuenzanisa zvese pakupera kwemwedzi (kana kotatu).
Maitiro ekuona sei kuburitsa
Pakutanga, chirevo chebhangi chaigona kungowanikwa chete kuenda kubhangi uye kuukumbira iwe pachako. Nekufamba kwenguva, sevhisi iyi yakazoitwa otomatiki, ichigona Tora kuburikidza neATM. Nekudaro, kuonekera kweInternet uye mapeji ewebhu, zvakatora kumwe kusvetuka, nekuti vanhu vaigona kuongorora gwaro iri kuburikidza nemushandisi wavo wepamhepo mubhangi.
Parizvino, fomu iyi uye mashandisirwo epamutemo ebhengi parunhare zvinobvumidza nzira iyi yekudzidzisa kuitiswa, kusanganisira purinda gwaro kuti uve naro panyama.
Ungawana sei chirevo chebhangi
Parizvino, kutora chirevo chebhangi chiri nyore. Nekuti unogona enda kubazi rako rebhangi uye urikumbire, rione (uye rirande) kubva pawebhusaiti rebhangi, riitarise mufoni kana kuti riitwe paATM.
Chinhu chakanaka ndechekuti, kana ukazvitarisa pawebhu, unogona kusarudza nguva yakasarudzika, chimwe chinhu icho, mune dzimwe nzvimbo, chisingagone, kana iwe unofanirwa kuchikumbira zvakajeka. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti mabhangi anochengeta zvinyorwa zvekufamba kwako kose kwenguva iri pakati pemakore mashanu kusvika makumi maviri emakore, saka kupfuura ipapo hapazove nechinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Banca » Chii chinonzi bank statement